rebirth – Dhammadīpa
Posted on6May 2017 by Ashin Sopāka
The king asked: ‘Why is it, Nāgasena, that all men are not alike, but some are short-lived and some long-lived, some sickly and some healthy, some ugly and some beautiful, some without influence and some of great power, some poor and some wealthy, some low born and some high born, some stupid and some wise?’ The Elder replied: ‘Why is it that all vegetables are not alike, but some sour, and some salty, and some pungent, and some acidic, and some astringent, and some sweet?’
‘I fancy, Sir, it is because they come from different kinds of seeds.’
‘And just so, great king, are the differences you have mentioned among men to be explained. For it has been said by the Blessed One: “Beings have each their own kamma, are inheritors of kamma, belong to the tribe of their kamma, are relatives by kamma, have each their kamma as their protecting overlord. It is kamma that divides them up into low and high and the like divisions.”’ – Mil 3.4.4
Rājā āha—“bhante nāgasena, kena kāraṇena manussā na sabbe samakā, aññe appāyukā, aññe dīghāyukā, aññe bahvābādhā aññe appābādhā, aññe dubbaṇṇā, aññe vaṇṇavanto, aññe appesakkhā, aññe mahesakkhā, aññe appabhogā, aññe mahābhogā, aññe nīcakulīnā, aññe mahākulīnā, aññe duppaññā, aññe paññavanto”ti? Thero āha—“kissa pana, mahārāja, rukkhā na sabbe samakā, aññe ambilā, aññe lavaṇā, aññe tittakā, aññe kaṭukā, aññe kasāvā, aññe madhurā”ti?
“Maññāmi, bhante, bījānaṁ nānākaraṇenā”ti.
“Bhāsitampetaṁ, mahārāja, bhagavatā—‘kammassakā, māṇava, sattā kammadāyādā kammayonī kammabandhū kammap­paṭi­saraṇā, kammaṁ satte vibhajati yadidaṁ hīnap­paṇīta­tāyā’”ti.
မိလိန္ဒမင်းသည် “အရှင်ဘုရား နာဂသေန အချို့သော လူတို့သည် အသက်တိုကုန်၏။ အချို့သော လတို့သည် အသက်ရှည်ကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် အနာများကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် အနာနည်းကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် အဆင်းမလှကုန်၊ အချို့သော လူတို့သည် အဆင်းလှကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် တန်ခိုးနည်းကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် တန်ခိုးကြီးကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် ဉစ္စာစည်းစိမ် နည်းပါးကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် ဉစ္စာစည်းစိမ် များပြားကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် အမျိုးဇာတ်ယုတ်နိမ့်ကုန်၏၊ အချို့သောလူတို့သည် အမျိုးဇာတ် မြင့်မြတ်ကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် ပညာမဲ့ကုန်၏၊ အချို့သော လူတို့သည် ပညာရှိကုန်၏၊ လူအားလုံးတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် မတူမျှကြပါကုန်သနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။ နာဂသေနမထေရ်သည် “မင်းမြတ် အချို့သစ်ပင်တို့သည် ချဉ်ကုန်၏၊ အချို့သစ်ပင်တို့သည် ငန်ကုန်၏၊ အချို့သစ်ပင်တို့သည် ခါးကုန်၏၊ အချို့သစ်ပင်တို့သည် စပ်ကုန်၏၊ အချို့သစ်ပင်တို့သည် ဖန်ကုန်၏၊ အချို့သစ်ပင်တို့သည် ချိုကုန်၏၊ သစ်ပင်အားလုံးတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် မတူမျှကြကုန်သနည်း” ဟုမိန့်တော်မူ၏။
“အရှင်ဘုရား မျိုးစေ့တို့၏ ခြားနားခြင်းကြောင့် မတူမျှကြကုန် ဟုမှတ်တင်ပါ၏ဟု (လျှောက်၏)။”
မင်းမြတ်မြတ်စွာဘုရားသည် “လုလင် သတ္တဝါတို့သည် ကံသာလျှင် မိမိဉစ္စာရှိကုန်၏၊ ကံ၏ အမွေခံဖြစ်ကုန်၏၊ ကံသာလျှင် အကြောင်းရှိကုန်၏၊ ကံသာလျှင် ဆွေမျိုးရှိကုန်၏၊ ကံသာလျှင် ကိုးစားရာရှိကုန်၏၊ အကြင်ကံသည် ရှိ၏၊ ထိုကံသည် သတ္တဝါတို့ကို အယုတ်အမြတ်ဖြစ်ခြင်းငှာဝေဖန်၏” ဟု ဤတရားကို ဟောကြားအပ်၏။
Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yểu thọ, các kẻ khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ?”
Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, vì sao tất cả các cây cối là không giống nhau, những cây này là chua, các cây khác là mặn, những cây này là đắng, các cây khác là cay, những cây này là chát, các cây khác là ngọt?”
“Thưa ngài, trẫm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giống.”
“Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp, có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp là thân quyến, có nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân loại các chúng sanh tức là theo tính chất hạ liệt hay cao quý.’”
Sooty Headed Bulbul ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, intentional action, kamma, rebirth